အပြည့်အဝ Serial Number ID ကိုကတ်, လုံးဝဆက်တိုက်နံပါတ် ID ကိုကတ်, စဉ်ဆက်မပြတ် Serial Number ID ကိုကတ်, စဉ်ဆက်မပြတ်ကျင့်ထုံး ID ကိုကတ်, စဉ်ဆက်မပြတ်ကျင့်ထုံး IC Card ကို, လုံးဝအဆက်မပြတ် Wiegand Code ကို ID ကိုကတ်, စဉ်ဆက်မပြတ်နံပါတ်သတ်မှတ်ခြင်း Card ကို, လုံးဝဆက်တိုက်နံပါတ် EM Card ကို
လုံးဝဆက်တိုက်နံပါတ် EM Card ကို, စဉ်ဆက်မပြတ် Serial Wiegand Code ကို ID ကိုကတ်
EM ကဒ် / LF Card ကို လုံးဝဆက်တိုက်နံပါတ် EM Card ကို, လုံးဝဆက်တိုက်နံပါတ် ID ကိုကတ်, လုံးဝအဆက်မပြတ် Wiegand Code ကို ID ကိုကတ်, စဉ်ဆက်မပြတ်ကျင့်ထုံး IC Card ကို, စဉ်ဆက်မပြတ်ကျင့်ထုံး ID ကိုကတ်, စဉ်ဆက်မပြတ်နံပါတ်သတ်မှတ်ခြင်း Card ကို, စဉ်ဆက်မပြတ် Serial Number ID ကိုကတ်, အပြည့်အဝ Serial Number ID ကိုကတ်
အဆိုပါအဆက်မပြတ်နံပါတ် ID ကိုကတ်ကိုလည်း encrypted နိုင်ပါတယ်.
နည်းပညာ parameters တွေကို
chip: ID ကို: TK4100, EM4305
အိုင်စီ: တရုတ်ထုတ်လုပ်မှုသော induction IC chip ကို
operating ကြိမ်နှုန်း: 125kHz, 13.56MHz
induction အကွာအဝေး: 2~ 10cm
အလုပ် mode ကို: ID ကို: သာဖတ်ရန်
အိုင်စီ: R / W ကို
ဒေတာကို retention ကို: > 10 နှစ်ပေါင်း
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -25℃ ~ + 70 ℃
ပစ္စည်း: PVC, ပေ, PETG, ကို ABS, စက္ကူ
အရွယ်: L85.5mm × W54mm, အထူ 0.80mm သို့မဟုတ် 1.80mm ( 1.80တစ်ဦးခရီးဆောင်အပေါက်နှင့်အတူမီလီမီတာအထူကဒ် )
အပြည့်အဝ Serial Number ID ကိုကတ်ယင်း ID ကိုကဒ်၏ပြည်တွင်းရေးနံပါတ်စဉ် increment သို့မဟုတ်လျှော့ဖြစ်ပါတယ်, အားလုံးစဉ်ဆက်မပြတ် ID ကိုကုဒ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်, ယင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအရေအတွက်တစုံတယောက်သောသူသည်ခွင့်မပြုပါဘူး. အဆိုပါနံပါတ်စဉ်ဆက်မပြတ်၏အမိန့်နှင့်အညီဖြစ်ပါသည်, လွယ်ကူစွာထိန်းချုပ်န်ထမ်း access ကိုထိန်းချုပ်ကဒ်နံပါတ်စဉ်ဆက်မပြတ်မှတ်ပုံတင်ရေး. ဘယ်အချိန်မှာကဒ်မှတ်ပုံတင်, သာ serial number ကဒ်စတင်ရိုက်ထည့်ပါကအပေါ်-bits ကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်, .ID အနိမ့်အကြိမ်ရေကဒ်ပြည်တွင်းရေးနံပါတ်စဉ် increment သို့မဟုတ်လျှော့မှတ်ပုံတင်ရန်လွယ်ကူသော: သင်က 5-byte hexadecimal ပြည်တွင်းရေးနံပါတ်စဉ်အတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါတယ်, ABA အတွက်ပြည်တွင်းရေးနံပါတ်စဉ် (8H ကို) ပုံစံ, WG26 format နဲ့အတွင်းပိုင်းနံပါတ်စဉ်, သို့မဟုတ်အခြားပုံစံများ. ဒါဟာကျယ်ပြန့်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းဖော်ထုတ်ခြင်း၏လယ်ပြင်တွင်အသုံးပြုသည် (အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, အချိန်နှင့်တက်ရောက်သူ, စသည်တို့ကို), ID ကိုကဒ်နံပါတ်စဉ်ပုံနှိပ်နိုင်သည့်, လိုဂို, ပုံစံ, coding, ဒါပေါ်ဓာတ်ပုံနှင့်. ကို default ပုံနှိပ် 8H-10D 10-bit နဲ့ကုဒ်နှင့် Access Control Wiegand ကုဒ်.
Serial Number ID ကိုကတ်၏ထုတ်လုပ်မှု၏အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုစွန့်ပစ်ကတ်များထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ရံဖန်ရံခါကျိုးအရေအတွက်ကဖြစ်ရပ်ဆန်းရှိလိမ့်မည်, ထိုနည်းတူအမည်ခံ Serial Number ID ကိုကဒ်ကိုခေါ်, လုံးဝအမှတ်စဉ်နံပါတ်၏လိုက်စားလျှင်, ဖြည့်စွက်ရန်အဖတ် / Write ID ကိုကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်. ကဒ်၏အခြား application များကျော် ID ကိုလုံးဝ serial number ကဒ်စျေးနှုန်းအားသာချက်, သငျသညျသယ်ဆောင်ဖို့ပိုက်ဆံအိတ်ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်.
IC ကဒ်၏ပြည်တွင်းရေး code က chip ကိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖြစ်ပါတယ် induction ပျောက်ကင်းအောင်ကုသထားပြီး, မပြောင်းနိုင်ပါ, အဆိုပါန့်ကိုကနေ IC ကဒ်အနှောင်အဖွဲ့မှတဆင့်လုပ်ရမည်, စမ်းသပ်ခြင်း, အလွှာပြုလုပ်ခြင်း, ပုံနှိပ်ခြင်း, Die-cut နှင့်လင့်များတစ်စီးရီး. နံပါတ်စဉ်ခက်လွန်း၏ function ကိုအောင်မြင်ရန် internal ကုဒ်. serial နံပါတ် IC Card ကိုတစ်ဦး fixed ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်အရေအတွက်ကရေးသားဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, ထို့နောက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများတစ်ခုလုံးကိုကဏ္ဍ encrypt လုပ်, တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်သင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ကဒ်အရေအတွက်ကထွက်ဖတ်ရှုဖို့ကဒ်စာဖတ်သူကိုကိုသုံးပါ, နံပါတ်စဉ် IC ကဒ် function ကိုအောင်မြင်ရန်သကဲ့သို့.
အရေးအသားကဒ်များတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များကိုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးရနိုင်, ၏အရှည် 1-15 ပေါင်းစပ်၏အက္ခရာသို့မဟုတ်ဂဏန်း, အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု. အဆိုပါ IC ကဒ်၏ encryption ကို function ကိုထိရောက်စွာကူးယူခံရခြင်းမှကဒ်ကိုတားဆီးနိုငျသောကွောငျ့, လုံခြုံရေးကတော့နံပါတ်စဉ် ID ကိုကတ်ထက်အများကြီးပိုမြင့်, နှင့် IC ကဒ်၏ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါနံပါတ်စဉ် IC ကဒ်လုံးဝနံပါတ်စဉ် ID ကိုကဒ်ကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်.
စဉ်ဆက်မပြတ်နံပါတ် ID ကိုကတ်ကိုလည်း encrypted နိုင်ပါတယ်.
လုံးဝဆက်တိုက်နံပါတ် IC / ID ကို chip ကိုသော့ချက်လက်စွပ်သို့လည်းလုပ်နိုင်ပါသည်, လက်ပတ်, အကြွေစေ့ငွေကြေးကတ်များ, Epoxy ကတ်များနှင့်အခြားပုံစံမျိုးစုံ.
ကင်းလှည့်စနစ်အား, အချိန်တက်ရောက်သူစနစ်က, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ဝင်ပေါက်ကိုယ်ရံတော်စနစ်က, အသွားအလာ, ယာဉ်ရပ်နားစီမံခန့်ခွဲမှု, ဝိသေသလက္ခဏာစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း, ရောင်းချမုန့်ညက်စီမံခန့်ခွဲမှု, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အ, တဦးတည်းကတ် Solutions နှင့်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းဖော်ထုတ်ခြင်း၏အခြားဒေသများ.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်လုံးဝဆက်တိုက်နံပါတ် EM Card ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, စဉ်ဆက်မပြတ် Serial Wiegand Code ကို ID ကိုကတ်
prev: 18-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်, 10-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်, 8-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်
နောက်တစ်ခု: အတိအကျတူနံပါတ် ID ကိုကတ်, အတိအကျတူ Code ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး EM Card ကို